'प्रहरीले इन्काउण्टर गर्दैन, आत्मरक्षाको लागि मात्र गोली चलाउछ' : डिआईजी पुष्कर कार्की - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘प्रहरीले इन्काउण्टर गर्दैन, आत्मरक्षाको लागि मात्र गोली चलाउछ’ : डिआईजी पुष्कर कार्की
Posted by Milap Subedi | २५ श्रावण २०७४, बुधबार ११:५६ |
नेपाल प्रहरीका नायव महानिरिक्षक तथा डिआईजी पुष्कर कार्की प्रहरी संगठनमा एउटा छुट्टै छवि बनाएको नाम हो । अहिले उनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय प्रवक्ताको रुपमा रहेका छन । प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका कार्कीसंग हेडलाईन नेपालले केहीदिन अघिमात्र ईन्काउन्टरमा मारिएका भनिएका प्रविण खत्रीका विषयसंगै प्रहरी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन कस्तो प्रयास भईरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेको छ ।
अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले अहिले केलाई प्राथामिकता दिएर अगाडी बढिरहेको छ ?
नेपाल प्रहरीको यहाँले भने जस्तै प्राथामिकताका क्षेत्रहरु कानुनले दिएको कामहरु तिनै हुन । त्यस मध्येपनि अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण र कानुनी जुन एउटा सम्वृद्ध निकायमा अनुसन्धान गरेर पठाउने प्रहरीको जिम्मेवारी हो । त्यसको लागि प्रहरीका धेरै पाटाहरु,विभागहरु र धेरै प्रयासहरु संलग्न हुन्छन । विशेष गरेर अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी विशेष भुमिकामा हुन्छ । त्यसलाई अघि बढाउन,दक्ष बनाउन र सफल बनाउन अहिले आएर हामिले संगठनले तत्काल अख्तियार गरेको नितीले यो लोकतान्त्रिक प्रहरी भनेको जनसहभागिता र मानव अधिकार संरक्षण देखि लिएर त्यसमा गैरकानुनी कामको नियन्त्रण देखि लिएर अपराध अनुसन्धानलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने जस्ता अगाडी बढ्ने पाटो त भैहाल्यो ।
प्रहरी संयन्त्र समग्रमा जुन संयन्त्र छ त्यसलाई आधुनिकिकरणमा लैजाने भैहाल्यो । त्यसबाहेक अहिले समाजमा जुन एउटा अपेक्षित बर्ग ति जोखिम बर्गहरु हुन्छन ति जोखिम बर्गलाई विशेष तार्गेट गरेर ध्यान दिईन्छ । खासगरी अपराधमा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुमा अपराधको भिक्टम हुने हुनाले त्यो ग्रुप समुदायप्रतिको सम्बोधनको पाटो रह्यो । त्यसबाहेक यो सुचना प्रवाहको संयन्त्र हुन्छ,जसलाई ईन्टरनेशनल नेटवर्क भनिन्छ त्यसलाई बढाउने कुराहरु भयो । यो आन्तरिक र बाह्य दुवै अहिलेको बर्तमान विश्व परिवेशमा ग्लोबलाईजेसन जुन सबैकुरा पहुँचको अधारमा चाँडैचाँडै पाउने कुरा हुन्छ । त्यसको लागि पनि यो सुचनाको पहुँच बढाउनु पर्ने हुन्छ । र अर्को संगठित अपराधको जुन विभिन्न जालो रहेका छन ति बढीरहने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई तोड्न पनि प्रहरी लागेको छ ।
कार्की ज्यू नेपाल प्रहरीले बेलाबेलामा दुई किसिमका थिमहरु ल्याउने गर्छ जस्तो कहिले प्रहरी साथी भनेर पनि थिम चलाईरहेको हुन्छ ,मुस्कानसहितको सेवा भन्ने थिमहरु पनि आएका थिए भने अर्कोतिर बेलाबेलामा ईन्काउन्टर हुँदाखेरी अपराधमा संलग्न भनेर आरोप लागेकाहरुको मृत्यू भएका घटनापनि आइरहेका छन यस किसिमका दुईवटा बाटाहरु देखिन्छ यसलार्य के भन्नुहुन्छ ? हिजोपनि एउटा घटना ललितपुरमा घटेको छ ।
यसलाई अहिले केही भन्ने अवस्था छैन यो अनुसन्धान भईरहेको पाटो पनि पर्यो । अहिले जुन छापामा आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका कुराहरु भईरहेको छ त्यसमा । तर यहाँले भनेको जस्तै प्रहरी भनेको एउटा साझेदारीमा एउटा पार्टनरसिप,जुन नागरिकको साझेदारीमा पनि हामिसंग सबै संयन्त्र पुरा हुँदैनन् । जुन विभिन्न संयन्त्रहरु हुन्छन,विभिन्न विभागहरु हुन्छन । ति कुराहरुले गर्दा साझेदारीमा प्रहरी अघि बढ्न पर्ने हुन्छ । त्यो चाँही जनहितको,जनताको जसलाई हामिले सेवा दिन्छौ त्यसको पहुँच सहज र सुलभ हुनपर्छ जुन साझेदारीका कार्यक्रमहरु हुन जसले गर्दा हामिले मुस्कान सहितको कार्यक्रहरु जस्तै तपाईले भनेका कुराहरुमा हाम्रो जोड रहदै आएको छ ।
प्रहरीले चुस्त दुरुस्त बनाउन एउटा सिमित स्रोतसाधनबाट कसरी प्रहरीले राम्रो गर्ने पाटोमा अंगिकार गरेको पोलिसी हो । जसमा स्रोत साधन कम हुन्छ भने त्यसमा जनसहभागितामा काम अघि बढाउने,यसमा ईभिडेन्स बेस भन्छन सबै कुरालाई अंगिकार गर्ने एउटा पाटो भयो ।
हामीचाँही नागरिकको सेवा गर्ने प्रहरी भएको कारणले गर्दा नागरिकसंगको साझेदारी जहिल्यैपनि अपरिहार्य हुन्छ । किनभने सेवाग्राही बर्ग त नागरिक नै हो । त्यो पाटो हुनाले त्यसमा यहाँले भनेको जस्तै इन्काउन्टर भन्ने कुरा प्रहरीमा हुँदैन,यो प्रहरीको आत्मरक्षाको लागि आफुलाई आफ्नो जुन हतियारसहितका तालिम प्राप्त प्रहरी हुन्छन त्यसमा गर्ने कामबारवाहीको बेला कसैको ज्यान जोखिमममा पर्छ भने त्यो पाटो भिन्नै भयो किनभने शक्ति प्रयोगको सिदान्त छ, जुन कानुनले किटान गरेको छ , आवश्यकता,समानुपातिक र कानुनसंगत भन्ने कुरा छ, त्यही कानुनी घेरामा रहेर प्रहरीले कामकारबाही अघि बढाउने हो । त्यसमा इन्काउन्टर भन्ने शब्द भन्ने हुदैन । किनभने आत्मरक्षाको लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त हुन्छ हामिले हतियार पनि दिएको हुन्छ ।
कही जोखिम छ भने कुनै नागरिक जोखिममा छ भने त्यसको सुरक्षाको लागि नै प्रहरी तालिमप्राप्त हुन्छन । कतै गोली पड्क्यो भने ,विष्फोट भयो भने आम नागरिक त्यहाँबाट नागरिक टाढा जान पर्ने हुन्छ भने प्रहरी त्यसतर्फ जानपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरी आत्मरक्षाको लागि गरिएका कारवाहीहरु,तत्कालको खतरालाई टार्नको लागि कानुनी घेरामा रहेर गर्ने कारवाहीबाट कसैको ज्यान जान सक्छ,ज्यान लिने प्रहरीको नियत हुँदैन,कानुनी कठघरामा ल्याउने नै प्रहरीको पहिलो प्रयास र लक्ष्य हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीमा बेलाबेलामा कुराहरु आउछ । प्रहरी संगठनमा साधन स्रोतको प्रयाप्त मात्रामा सुविधाहरु भएन,काम गर्न गाह्रो भो संगसंगै बाह्य हस्तक्षेपहरु हुने राजनितिक हस्तक्षेपहरु हुने,बाह्य दवाव हुने जस्तो कुराहरु पनि बाहिर आउने गर्छन, यो बाहिर आएका हल्लाहरुमात्र हुन कि यथार्थमा पनि त्यही हो ?
हो प्रहरीमा स्रोत साधनको त कमि छ । त्यसलाई पुर्ति गर्न प्रहरी संगठन र माथीको नेतृत्व लागेको पनि छ र सबै ठाँउहरुमा एउटा प्रहरी सडमा उभिदाखेरी एउटा लठी बोकेरा उभिएको प्रहरी हुन्छ । आम नागरिकलाई त्यो प्रहरी अनुसन्धानमा पनि तयही हुन्छ, सुरक्षा दिने पनि तयही हुन्छ तर त्यो प्रहरी उभिएको पछाडी के छ ? भन्ने चाँही संयन्त्र,विभिन्न स्रोत साधनले उसलाई प्रुफ गर्ने हो । त्यो प्रहरी बसेको ठाँउमा तत्काल पहुँच अर्को प्रहरी कति चाँडो पुग्न सक्छ ति कुराहरु हुन्छन ? त्यसले गर्दा जुन एउटा प्रहरीको पुर्वाधार,स्रोतसाधन,प्रहरीको जनशक्तिको परिचालमा चाँही उसले कानुनी सपोर्ट कसरी र कति दरो हुन्छ भन्नेकुरा प्रहरीको कार्यदक्षतामा जोडिएको हुन्छ ।
त्यसले गर्दा यहाँले भनेजस्तै स्रोत साधनको कमि छ नै, त्यसतर्फ स्रोत साधन कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा कुरा पनि भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको पनि प्राथामिकतामा पर्छ किनभने भर्खरै दुई चरणको स्थानिय चुनाव सकिए । अर्को चुनाव पनि आउदै छ । प्रदेश तथा केन्द्रको चुनाव पनि आउदैछ । त्यस कारण प्रहरीको लागि स्रोतसाधन कसरी जुटाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन पर्ने हुन्छ । त्यसो भन्दैमा काम नै नभएको हैन काम पनि भइरहेको छ ।
तर पर्याप्त नभएको भन्ने कुरा मात्र हो । जस्तो प्रहरीले प्रयोग गर्ने राईफलहरु छ २०४६ सालमा पनि तयो इनभ्यालिड राईफल भनेर आएको थियो । अहिलेपनि त्यही राईफल हामिले प्रयोग गरिरहेका छौ त्यसतर्फ अव त्यसलाई विस्थापित गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ । तर यहाँले भनेजस्तै जुन एउटा राजनितिक हस्तक्षेपको कुरा भएका छन । अहिले गृहमन्त्रीस्तरबाटै प्रहरीमा राजनितिक हस्तक्षेप गर्न दिन हुन्न,निर्देशन दिने भन्ने कुरा छ । प्रहरी आमनागरिकसंग ,सबैसंग काम गर्ने हुनछ जस्तो सबै राजनितिक दलहरुसंगै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जिल्लामा ।
त्यसले गर्दा उहाँहरुले भनेको कुरालाई केही कुराहरु उहाँहरुबाट आउछन । नागरिक त उहाँहरुमा पनि पुग्छ । प्रहरीले त्यो कुरा सुन्ने हो । तर त्यो कुरा सुने र प्रहरीले कानुनी कारवाही गर्न कानुन अनुसार उचित काम कारवाही गर्न छेक्दैन त्यसले गर्दा हत्त्उत्साही भनेर यदाकदा आउछ पनि त्यहाँ सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखले वा एज अ होल प्रहरी संगठनले कसरी लिन्छ भन्ने पाटो पनि हो । चासो आउछ । तर चासो आयो भन्दैमा हामिले हस्तक्षेप भयो भनेर लिनुपनी हुँदेन ।
नेपालको प्रहरी संगठन भित्रका साधन, स्रोत, वृतीविकास,संयन्त्र र बाहय प्रभावका कुराहरुलाई समग्रमा एकातिरबाट हेर्दाखेरी जस्तो यहाँसंगै पनि त विभिन्न विकसित मुलुकको कुरा संगसंगै संयुक्त राष्ट्रसंघको कुरा विभिन्न संयन्त्रहरुसंग पनि नजिक हुनुहुन्छ, समग्रमा भन्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरीको अहिलेको स्थिती कस्तो हो ?
प्रहरीको काम कारवाही सबै ठााउमा एउटै हो । आम नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो । आन्तरिक सुरक्षामा प्रहरीको अग्रगामी लिड एजेन्सी हो । त्यो कुरा सबैतिर संसारमा एउटै हुन्छ । त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा संसारमा फरक फरक छ । अव यो परिचालनको पाटोलाई हेर्दा नेपाल प्रहरीमा जुन हाम्रो एउटा स्रतो साधन आदी इत्यादी कुराहरु छ ।
सिमित स्रोतसाधनका बाबजुत पनि १० १५ बर्ष यता नेपाल प्रहरीले जुन एउटा ईमेज बनायो जुन एउटा जनविश्वास जितेको छ, प्रहरीले गरेको काम कारवाहीमा चासो छ । सुरक्षा चासो जसरी बढेको छ, त्यसमा प्रहरीले धेरै कामहरु सफलताका साथ सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर जुन जनविश्वास जितेको छ, त्यो खुसीको कुरा हो । तपाईले भनेजस्तो नेपाल प्रहरीको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसंग कामका अनुभव छन, त्यसमा चाँही प्राय प्रहरी संयन्त्रमा भनको एउटा पोलिटिकल डाइरेक्सन हरु हुन्छन,किनभने पालिटिकल लिडरसिपले चलाउनेहरु हुन्छन ।
तर तयो भनेको इन्टरफिनर कहीँपनि हुँदैन । त्यो ईन्टरफिनर भयो भने प्रहरी संगठन बिग्रिन्छ भन्ने कुरा लाईबेरिया जस्ता मुलुकमा देखिएको होला । अहिले त्यहाँका प्रहरी पनि ऐन, नियिम बनाएर कानुनी श्रृखला भित्र रहेर देशको संविधान ऐन नियम,नियमावलीको घेरामा रहेर निश्चित सिस्टम बनाउर काम त्यता पनि भइरहेको छ । तर अहिले समग्रमा तुलाना गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडी छौँ । हाम्रो संयन्त्र धेरै राम्रो छ । हामीले गरेको अनुभव पनि त्यही हो । प्रहरीका आधारभुत आवश्यकता जहाँपनि एउटै हुन्छन । काम गर्ने तरिका पनि एउटै हुन्छ । तर कसरी परिचालित हुन्छन भन्ने कुरा मात्र फरक हो ।
मैले अव राजनितिक कुरालाई जोड्न चाँहे, हाम्रो मुलुक संघियतामा गइसकेको छ, भनिन्छ नि नेपाल प्रहरीमा पनि लामो समय पछि अहिले एउटाा बढुवा भयो । सबैको कामको बाँठफाड जिम्मेवारी पनि होला । अव यो संघियताको ढाँचामा मुलुक जाँदैगर्दा त्यो ढाँचामा नेपाल प्रहरीले आफुलाई फिट गर्न के गर्दैछ ?
संघियतामा मुलुक गईसकेको अवस्थामा त्यो पोलिटिकल पाटो भयो, तर यसमा प्रहरी पनि राज्यको अंग भएको हुनाले राज्यको निति अनुरुप भएर जाने कुरा एउटा छ । तर त्यो आउदाखेरी त्यसलाई फिट हुने प्रहरी व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाल प्रहरी दखी लिएर उच्च कानुनी ज्ञाताहरु देखि लिएर गृह मन्त्रालयको लिडरसिपमा सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल अगाडी बढेको पाटो छ । संघियतामा प्रहरीको संरचना कस्तो हुन्छ ?प्रशासन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाँही ऐन तर्जुमा हुने प्रक्रियामा छ ।
त्यसमा संघिय प्रहरी ऐन ड्राफ्ट जुन संविधानमा भएको खाकाले पनि नेपाल प्रहरीको संघिय र प्रादेशिक स्वरुपलाई यसरी जान्छ भनेर खाका तयार पारिसकिएको छ, त्यस भित्र बसेर राम्रो,जनताले उचित सेवा पाउने किनभने त्यसमा नेपाल प्रहरीको पहुँच जहाँपनि पुगोस भन्ने धारणाले पनि हो । सेवा प्रवाह गर्न कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ कस्तो संगठन चाहिन्छ भन्ने कुरालार्य रि–स्टक्चरिङ र रि–फर्म भन्छौँ । र अव समय आएको छ ,यो पहिले देखीकै चाहना पनि हो । यसपछि चाँही प्रहरीको संरचना र सुधारका कुरा तिव्र रुपले अघि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संघिय खाकामा प्रहरी जान्छ तर तयसको काम अहिले भइरहेको छ ।
अहिले प्रहरी सेवा अवधी ३० बर्ष कायम गर्ने की ३२ बर्षमा पुर्याउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ नि यो बहसको अर्थ के हो ? र प्रहरी संगठनमा यसको असर के हुन सक्छ ?
प्राय मुलुकहरुको प्राक्टिस ने हो यो । एउटा प्रहरीले काम कारवाही गर्दाखेरी प्रहरीको पदावधी त्यसपछि पदको अवधी,सेवा अवधि र उमेरको हद र अन्य विविध कुराले रिटायर्ड हुने व्यवस्था हामी कहाँ छ । यो पहिले देखी नै छलफलको विषय भएको हो । अव संघिय प्रहरीको व्यवस्था कायम भएपछि एउटा नयाँ व्यवस्था तर्जुमा हुन्छ ।
त्यसमा यो कुराहरु समावेश हुन्छ ।र कुनैपनि ऐन लागु गर्नेबेलामा कसरी गर्ने के गर्ने र यसले संगठनलाई कहाँ पुर्याउछ ? यसमा संगठनका प्रहरीहरु कहाँ कहाँ उभिन्छन ? पछाडीका सवै सदस्यहरुलाई कसरी करियर पास जान्छ भन्ने कुरा त्यसमा आउछन । अहिले अवधीको कुरा कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बशको कुरा हेन यो त राज्यले निती बनाएर लागु गर्ने कुरा हो ।
तर यो विषय सबै प्रहरीको चासोको विषय भने हो । आफ्नो करियर र आफ्नो भोलीको भविष्य कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा सवै प्रहरीमा हुन्छ । यसमा सबैलाई सम्बोधन हुने गरी खाका राम्रै आउला भन्नेमा विश्वस्त छु ।
अन्त्यमा समाजमा,देशमा अपराध उन्मुलन गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको प्रमुख रुपमा भेमिका के हुन्छ र आम नागरिकको भुमिका के हुन्छ ? बताईदिनुस ।
प्रहरीको सेवा भनेको अपरिहार्य सेवा हो । अपरिहार्य सेवालाई प्रहरीले कसरी सेवा पहुँच विस्तार गर्ने कुरा भयो । अपराध भन्ने कुरा समाजमा भइरहने कुरा हो । त्यस्ता गतिविधिलाई प्रहरीले कसरी अन्त्य गर्ने त्यसलाई कसरी सही ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने कुरा प्रहरीको विषय रह्यो ।
एउटा प्रहरीले जिल्लामा गउर त्यहाँको शान्ति सुरुक्षा के छ ? अहिले सम्म कति अपराधका घटना घटे ? अव यसलाई मैले कसरी न्युनिकरण गर्न सक्छु,प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी गर्छु ? त्यसलाई हामी कार्यसम्पादन प्रक्रिया भन्छौ । त्यो प्रक्रियालाई प्रहरी कसरी पुरा गर्छ भन्ने विषय आम प्रहरी संगठनको तार्गेट हुन्छ । त्यो तार्गेट मिट कसरी गर्ने भन्ने खाका प्लान निश्चित बनेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरी संगठनले के अपेक्षा गरेको छ भने अपराधको न्युनिकरण र सफल अनुसन्धानको पाटोहरु छ त्यसमा सवै नागरिकको सहयोग जरुर रहन्छ ।
प्रहरीले नागरिक सुनुवाई गर्नुपर्छ । विभिन्न देशमा भएको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दैै हामिले पनि नागरिकले कस्तोखाले प्रहरी चाहनुहुन्छ ? प्रहरीले के गरे समाजमा अमयनचयन कायम हुन्छ भन्ने विषयमा नागरिकसंगै रहेर हामलिे काम गरिरहेका हुन्छौँ । उहाँहरुले पनि हामीलाई निरन्तर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ ।
Previousसन्देश बोहराको मौलिक तिज गीत ‘साँझमा घरमा आउ सानु’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
Nextकाठमाडौं महानगरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा धनिराम शर्मा पौडेल
अदालतको आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको समर्थन
९ माघ २०७३, आईतवार १५:१९
कांग्रेस प्रदेशसभा उम्मेदवार प्रदीप पौडेलको घरमा बम प्रहार
१६ मंसिर २०७४, शनिबार ०९:१३
‘विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने युगको प्रारम्भ’ : प्रधानमन्त्री ओली
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार १२:०२